Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247611 times)
« Reply #90 on: May 10, 2011, 12:40:08 PM »
" အကြမ်းဖက်သမား ချူချာ "
မော်စကို မြေအောက်ရထားဘူတာသို့ဆိုက်ရောက်လာသည့် ရထားခေါင်းတွဲဘက်ကို
ချူချာ ပြေးလာပြီး ရထားမောင်းသမားကို သေနတ်နှင့် ချိန်ပြီး ပြောသည် ။
" အာနာဒီး ကို မောင်းစမ်း " ( အာနာဒီး = ချူကော့ကာ ပြည်နယ် မြို့ တော် )
" ဟေ့..ချူချာ ခင်ဗျား ရူးနေသလား...ဒါ မက်ထရို (မြေအောက်ရထား ) ဗျ "
" နားမလည်ဘူး..အာနာဒီးကို မောင်း နို့ မဟုတ်ရင် သေနတ်စာ မိသွားမယ်.."
စက်ခေါင်းမောင်းသမား ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့...၊ စကားပြောခွက်ကို ကောက်ကိုင်ကာ
အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာလိုက်သည် ။
" ရထား တံခါး ပိတ်ပါတော့မယ်....နောက်ဘူတာ အာနာဒီး ဖြစ်ပါတယ်..."
« Reply #91 on: May 10, 2011, 03:10:59 PM »
" ကို ချူ ချာ ၏ ရှင်း လင်း ချက် "
မော်စကိုမှ မွေးရပ်မြေသို့ကိုချူချာ ပြန်ရောက်လာသည် ။ မော်စကိုမှာ ဘာတွေ မြင်ခဲ့ရသလဲ ဟု
" အ်ိမ်တွေ အကြီးကြီးပဲ "
" အိမ်ကြီးတွေ တို့ ဆီမှာလည်း ရှိပါတယ်..နောက် ဘာတွေ တွေ့ ခဲ့ရသလဲ "
" မော်တော်ကားတွေ အများကြီးပဲ "
" မော်တော်ကား...တို့ ဆီမျာလည်း ရှိပါတယ်ကွ..ဒီ့ပြင် ဘာတွေ တွေ့ ခဲ့သေးလဲ.."
" ရထား "
" ရထား....ရထားဆိုတာ ဘာလဲ.."
" အင်း...ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင် ဘယ်လို ရှင်းပြရပါ့မလဲ.....ခင်ဗျားတို့ 
ပင်လယ်ဖျံ ကို သိလား.."
" အေး...ရထား ဟာ ပင်လယ်ဖျံ နဲ့မတူဘူး..."
« Reply #92 on: May 10, 2011, 03:55:25 PM »
" ချူ ချာ စစ် သား - ၁ "
တပ်သား ချူချာ ကင်းစောင့်နေသည် ။ လူတစ်ယောက် ဖြတ်လာသည် ။ ချူချာ လှမ်းအော်ပြီး ပြောသည်။
နောက်တစ်ယောက် ဖြတ်လာပြန်သည် ။
" ကြိုးကြာ "
" ကြိုးကြာ မဟုတ်ဘူး... ကြက်ဖ အေး..သွား "
" ချူ ချာ စစ် သား - ၂ "
တပ်သား ချူချာ ကင်းစောင့်နေသည် ။
" ငါပါ...တာဝန်ကြပ်ပါကွ..ပုလင်းပါ ဆွဲလာတယ်.."
" တာဝန်ကြပ်သွား...ပုလင်းနေခဲ့ "
" ချူ ချာ စစ် သား -၃ "
" တပ်သား အီဗန်နော့..တို့ နိုင်ငံတော်ဆိုတာ ဘာလဲ သိလား...အေး မသိရင် မှတ်ထား
တို့ နိုင်ငံတော် ဆိုတာ မင်းရဲ့ အမေပဲ...နားလည်တယ်နော် "
" နားလည်ပါတယ်..ဗိုလ်ကြီး "
" မင်း နားလည်တာကို ပြန်ပြောစမ်း "
" တို့ နိုင်ငံတော်ဟာ ကျနော့် အမေပါ.."
" အေး..ဟုတ်တယ်.. ကဲ တပ်သား ချူချာ တို့ နိုင်ငံတော်ဆိုတာ ဘာလဲ.."
" တပ်သား အီဗန်နော့ရဲ့အမေပါ.."
" မင်း အင်မတန် တုံးပါလားကွ ဟေ..တို့ နိုင်ငံတော်ဟာ မင်းရဲ့ အမေလည်း ဖြစ်တယ်..
" နားလည်ပါတယ် ဗိုလ်ကြီး "
" မင်း ဘယ်လို နားလည်သလဲ ပြောစမ်း.."
" ကျနော်ဟာ တပ်သား အီဗန်နော့ ရဲ့ညီ ဖြစ်ပါတယ်..."
« Reply #93 on: May 10, 2011, 04:11:13 PM »
" ချူ ချာ စစ် သား -၄ "
စစ်သင်တန်း ဆင်းလာသော ကိုချူချာကို စီ အိုင် အေ က ဖမ်းမိသွားသည် ။ ၄င်းကို
နည်းမျိုးစုံနှင့် စစ်မေးသည် ။ ချူချာထံမှ ဘာသတင်းမှ မရချေ..။ နောက်ဆုံးတွင်
မေးတာကို မဖြေရင် ပစ်သတ်မည် ဟု ခြိမ်းခြောက်ကာ တစ်ည စဉ်းစားရန် အချိန်
နောက်တစ်နေ့မနက် ၄င်းအား ပိတ်ထားသည့် အခန်းကို ဖွင့်လိုက်ရာ..နံရံကို ခေါင်း
နှင့် တိုက်နေသော ချူချာကို တွေ့ ရသည် ။ ၄င်း၏ နှုတ်မှလည်း ယူကျုံးမရသံဖြင့်
တတွတ်တွတ် ပြောနေသည်ကို ကြားကြရသည် ။
" ငါ့ကိုက ညံ့ပါတယ်...သင်တန်းဆရာတွေက ပြောသား
မှတ်မိအောင် လုပ်ထား .. မှတ်မိအောင် လုပ်ထား လို့"
" ချူ ချာ စစ် သား - ၅ "
" တပ်သားချူချာ ..ဘာဖြစ်လို့ဓါတ်ငွေ့ ကာ မျက်နှာဖုံးကို မစွတ်ထားရတာလဲ.."
" ကျနော် နှာစေး နေတယ် ဗိုလ်ကြီး...မထူးပါဘူး
ကျနော် ဘာအနံ့ မှ ရမှာမှ မဟုတ်တာ..."
« Reply #94 on: May 10, 2011, 04:33:38 PM »
" သေ ချာ ရဲ့လား "
အင်္ဂလိပ် ဘဏ်သူဌေးတစ်ဦးတွင် အလွန်လိမ်မာသော ခွေးတစ်ကောင်ရှိသည် ။ တစ်နေ့ တွင်
ခွေးကို လူစကား ပြောတတ်အောင် သင်ပေးသည့် လူတစ်ယောက် ပဲရစ်မြို့တွင်ရှိကြောင်း သူဌေး၏ သားဖြစ်သူ
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ဂျက်ဖ် က သတင်းစာတွင် ဖတ်လိုက်ရသည် ။
ချာတိတ်သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့အလွန် အလည်သွားချင်သည် ။ သို့ နှင့် ခွေးကို လူစကား
တတ်အောင် သင်ပေးရန်အတွက် မိမိကို ခွေးနှင့်အတူ ပြင်သစ်သို့စေလွှတ်ရန် အဖေဖြစ်သူအား ပူဆာသည် ။ အ
ကြိမ်ကြိမ် ပူဆာလွန်းသဖြင့် အဖေက သားကို ခွေးနှင့်အတူ လွှတ်ရန် သဘောတူ ခွင့်ပြုလိုက်သည် ။
ဂျက်ဖ် သည် ခွေးနှင့်အတူ သင်္ဘောစီးပြီး ခရီးထွက်သည် ။ လမ်းခရီးတွင် ဂျက်ဖ် သည် ခွေးကို
ရေထဲ တွန်းချပြီး တစ်ဦးတည်း ခရီးဆက်သည် ။ ပဲရစ်တွင် အားပါးတရ လျှောက်လည်ပြီး လန်ဒန်သို့ပြန်လာသည် ။
မိဘများက သားကို ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုကြသည် ။ အဖေက ပထမဆုံး မေးသည် ။
" ဂျက်ဖ် ...ခွေး ဘယ်မှာလဲကွ ဟေ..."
" သေသွားတယ် ဖေဖေ "
" သေသွားတယ် ..ဟုတ်လား..ဘာဖြစ်လို့သေသွားရတာလဲ..သွားတုန်းက ကျန်းကျန်းမာမာကြီးပဲဟာ
" ဒီလိုပါ ဖေဖေ...သူ့ ကို ကျနော် အစတုံး ပစ်ပလိုက်ရတယ်.."
" အစတုံး ပစ်ပလိုက်ရတယ်..ဟုတ်လား..သေသေချာချာ ရှင်းပြစမ်း.."
" ဒီလိုပါ...သူ လူစကား စပြောတတ်တာနဲ့ကျနော့်မှာ အကြီးအကျယ် ဦးနှောက်ခြောက်ရတယ်.
မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေ လျှောက်ပြောတယ်..ဥပမာ အိမ်က အိမ်ဖော်မလေးကို ဖေဖေ ဖက်တယ်
နမ်းတယ်...တစ်စုံတစ်ခု လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်.."
အဖေ့ ၏ နဖူးပေါ်တွင် ချွေးများ စို့ လာသည် ။ အတန်ကြာ စကား မပြောနိုင်ပဲ ဖြစ်နေသည် ။
ထို့ နောက် စိတ်လှုပ်ရှားသံဖြင့် သားကို မေးသည် ။
" ဂျက်ဖ်...ခွေး..အသက်ရှင်လျှက် မရှိတော့ဘူး ဆိုတာ မင်း သေချာတယ်နော်..."
« Reply #95 on: May 11, 2011, 09:32:00 AM »
" အန် ချင် တယ် "
ရေချိန် တော်တော်လေးကိုက်နေသော အရက်သမားတစ်ယောက် ဘတ်စ်ကားပေါ် တက်လာပြီး ပြောသည် ။
" အန်ချင်တယ်..အခုပဲ အန်ချလိုက်တော့မယ် "
ခရီးသည်များက ၄င်းကို ၀ိုင်းဝန်း တောင်းပန်ကြသည် ။ မှတ်တိုင်ရောက်သည်အထိ အောင့်အည်းရန် နှင့် ထိုအခါ
ကျမှ စိတ်ကြိုက် အန်ချရန် ဖျောင်းဖျသည် ။
" ကောင်းပြီ...၄၈ အထိ ရေမယ်..၊ ၄၈ ပြည့်ရင် အန်မယ်.."
ခရီးသည်များ စိတ်သက်သာရာ ရသွားကြသည် ။ မှတ်တိုင်ရောက်ရန် နီးကပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည် ။ သို့ သော်
ချက်ချင်းပင် အမူးသမားထံမှ နောက်ထွက်လာသော အသံကြောင့် အားလုံး ရှုံ့ မဲ့သွားကြသည် ။
" ခြောက် ရှစ် လီ လေးဆယ့်ရှစ် ..ဝေါ့......"
" မြင် ရက် သား နဲ့"
အရက်ဘားမှ လူတစ်ယောက် ရေချိန်လွန်ပြီး ထွက်လာသည် ။ မိမိ ကား ရှိရာသို့ယိုင်တိယိုင်တိုင်ဖြင့် လျှောက်
သွားသည် ။ ရဲသားတစ်ယောက် ၄င်းအနား ရောက်လာပြီး ပြောသည် ။
" ဒီလို ပုံစံမျိုးနဲ့ကားနဲ့သွားလို့ဖြစ်ပါ့မလားဗျ.."
" ခင်ဗျား မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ...ကျုပ်မှ လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ဟာ..."
« Reply #96 on: May 11, 2011, 10:01:32 AM »
" ကျေး ဇူး ရှင် "
သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် မီးဖိုချောင်ထဲတွင် တိတ်တိတ်လေး အရက်ခိုးသောက်
နေကြသည် ။ ပုလင်းကုန်သွားရာ ဆက်သောက်ချင်ကြသဖြင့် အိမ်ရှင်က ပြောသည်။
" ဟေ့ကောင်..ငါ့အိပ်ခန်းထဲသွားပြီး ကန့် လန့် ကာနောက် ပြတင်းပေါက် ဘောင်ပေါ်မှာ
တင်ထားတဲ့ပုလင်းကို ဆွဲလာခဲ့ "
ခဏအကြာတွင် သူငယ်ချင်း ပုလင်းကို ဆွဲပြီး ပြန်လာသည် ။ အိမ်ရှင်ကို ပြောသည် ။
" သူငယ်ချင်း ကုန်းတိုက်တဲ့စကား ငါ မပြောတတ်ဘူးဆိုတာ မင်း သိပါတယ် . ဒါပေမဲ့
မင်း အိပ်ခန်းထဲမှာ မင်းမိန်းမဟာ တစ်ခြားယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့အိပ်နေတာ ငါ
" ရှူး...တိုးတိုးပြောပါ...မင်း ယူလာတဲ့ ပုလင်းဟာ သူ့ပုလင်းကွ.."
" ကူ ညီ တတ် သူ "
မော်စကိုမြို့တစ်နေရာတွင် ဖြစ်သည် ။ ဇိုးသမား တစ်ယောက်သည် မီးပွိုင့် ကို ဖက်ရင်း
လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဓါတ်တိုင်ကို ထုသည် ။ နှုတ်မှလည်း လျှာလေးအာလေးဖြင့် အော်သည် ။
" မိန်းမရေ....တံခါး..ဖွင့်..ဖွင့်ပါကွ...ဖွင့်လို့..ငါ ပြောနေတယ် ဟေ့.."
ရဲသားတစ်ယောက် အနားကပ်လာပြီး မေးသည် ။
" ဟေ့ လူ ဘာဖြစ်နေတာလဲ.."
" အိမ်ထဲကို မိန်းမက ပေးမ၀င်လို့"
ရဲသားသည် ဓါတ်တိုင်ကို လက်သီးဖြင့် ထုပြီး အော်သည် ။
" အိမ်ရှင်မ..တံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ "
« Reply #97 on: May 11, 2011, 10:09:40 AM »
" မ သောက် ဘူး "
" တစ်ခုခု သောက်ပါလား "
" ဟင့်အင်း ကျနော် ဘာမှ မသောက်ချင်ပါဘူး.."
" လက်ဖက်ရည် ဖြစ်ဖြစ် သောက်ပါ "
" ဟင့်အင်း ကျနော် လက်ဖက်ရည် မကြိုက်ဘူး "
" ကော်ဖီလည်း မသောက်ပါဘူး "
" ၀ီစကီ နဲ့ဆိုဒါ ထည့်ပေးရမလား..."
" ဟင့်အင်း..ကျနော် ဆိုဒါ မသောက်ဘူး.."
" မှား ပြီ "
" ဟိုတစ်လောက မူးမူးနဲ့အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာတယ် ကလေးတွေ ငါ့ကို မမှတ်မိကြဘူး.."
" အမူးပြေတော့ကော .."
" အမူးပြေတော့ သူများအိမ်ထဲ ငါ ရောက်နေမှန်း သိလိုက်ရတယ်.."
« Reply #98 on: May 11, 2011, 10:22:09 AM »
" စ ကား နား ထောင် သူ "
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နှင့်အတူ အရက်မူးပြီး ပြန်ရောက်လာသော ယောင်္ကျားကို
မိန်းမက ခါးထောက်ပြီး အော်သည် ။
" ရှင်...ဒီအရေတွေ သောက်လာပြန်ပြီလား....သေချင်းဆိုးကြီး "
" မိန်းမရေ....နောက် နှစ်ခါလောက် ထပ်ပြောစမ်းပါဦး "
" သေချင်းဆိုးကြီး....သေချင်းဆိုးကြီး....ကဲ "
ယောင်္ကျားက ပါလာသော သူငယ်ချင်းကို ဂုဏ်ယူသံဖြင့် ပြောသည် ။
" တွေ့ တယ်မဟုတ်လား...ငါ့မိန်းမက ငါ့စကားကို အင်မတန် နားထောင်တာ ကလား.."
" အ ကြောင်း သုံး ခု "
ရုရှားနိုင်ငံ ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေတွင် ဖွင့်ထားသော နလံထ အနားယူစခန်းတွင် ဖြစ်သည် ။
အနားယူ ကုသမှု ခံယူနေသူ နှစ်ဦး စကားပြောနေကြသည် ။
" လာဗျာ..အရက်ဆိုင် သွားရအောင် "
" မသွားချင်ဘူး ဗျာ.."
" တစ်အချက်..ဗော့ဒ်ကာဟာ လူ့ ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်..
နှစ်အချက် အရက်သောက်တယ်ဆိုတာ သိသွားရင် စခန်းက မောင်းထုတ်ခံရနိုင်တယ်..
သုံးအချက် အခုကို ကျနော် တော်တော်လေး မူးနေပြီ..."
« Reply #99 on: May 11, 2011, 10:40:57 AM »
" ပိုက် ဆံ အ ကုန် မ ခံ နဲ့"
အင်္ဂလိပ်..၊ ပြင်သစ် နှင့် ရုရှားတို့စကားပြောနေ ကြသည် ။ ပြင်သစ်က ပြောသည် ။
" ကျနော့် အိပ်ခန်းထဲမှာ လျှို့ ဝှက် အသံဖမ်းစက် တစ်လုံး တပ်ထားတယ်....နယ်က ပြန်
လာတဲ့အခါ စက်ကို ဖွင့်လိုက်တယ်.. ကျနော် မရှိတုန်း ကျနော့်မိန်းမ ဘာလုပ်သလဲ ဆို
အင်္ဂလိပ်က ပြောသည် ။
" ကျနော်ကတော့ အိပ်ခန်းထဲမှာ မိန်းမ မသိအောင် စီစီတီဗွီ ကင်မရာ တစ်လုံး တပ်ထားတယ်
ကျနော့် မိန်းမဆိ ဘယ်သူ လာသလဲ ဆိုတာတောင် ကျနော် မြင်ရတယ်. "
ရုရှားက ပြောသည် ။
" ခင်ဗျားတို့အလကား ပိုက်ဆံဖြုန်းတဲ့လူတွေ..ကျနော့် နည်းက လွယ်လွယ်လေး...နယ်က
ပြန်လာတဲ့ အခါမှာ ဘေးခန်းက အ်ိနီးချင်း အမျိုးသမီးကို အရင်သွားပြီး သူ့ ကို ပြောတယ်
နင် ဘာဖြစ်လို့နင့် ယောင်္ကျားကို ဖောက်ပြန်တာလဲ လို့ငါ ကဖောက်ပြန်တယ် ဟုတ်လား
လို့သူက ဒေါနဲ့ မောနဲ့ပြန်ပြောပြီး ရှင့် မိန်းမကလေ..ရှင့်မိန်းမကလေ နဲ့ စပြီး ကျုပ်မိန်းမ
ဘာလုပ်သလဲဆိုတာ အကုန် ပြောပြတော့တာပဲ..."